‘नाफा-घाटा प्रेसमा आउँदा पनि अफ्ट्यारो भयो’ : अशोक समशेर जबरा
काठमाडौँ । हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक समशेर जबराले बैंकको नाफा घाटा लगायतका सबै विवरण पत्रिकामै छाप्नुपर्ने भएकाले पनि केहि हदसम्म अफ्ट्यारो भएको बताएका छन् । उनले हिमालयन बैंक लिमिटेड स्ट्राटिजिक प्लानसहित अगाडी बढेको बताउँदै पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा समेत टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ ‘बैंकिङ सेरोफेरो’का लागि सहकर्मी मनोज […]
‘बैंकास्योरेन्स’का नाममा बैंकबाट पनि अत्याचार भएको हो’ : बैंकर ढकाल
काठमाडौँ । डेभलोपमेन्ट बैंकर्स एसोसीएसनका अध्यक्ष एवम् गरिमा बिकास बैंकका सीइओ गोबिन्द प्रसाद ढकालले बैंकलाई राम्रो बनाउनेमात्र नभई डुबाउने पनि सिइओ रहेकाले गलत गर्ने सीइओलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम ‘बैंकिङ सेरोफेरो’सँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैंक भनेकै नाफामुखी संस्था भएकाले बैंकले नाफा […]
एग्रेसिभ ग्रोथका नाममा तातै खाउँ जल्दै मरौं भन्ने सिद्धान्तमा सनराइज बैंक छैन’ जनक शर्मा पौड्यालको
काठमाडौँ । सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले सनराइज बैंक कृषकहरुको बैंक भएको बताएका छन् । ठूला व्यापारिक घराना भन्दापनि कृषकहरुलाई आफ्नो बैंकले जोड दिने उनको तर्क छ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम ‘बैंकिङ सेरोफेरो’को शनिबारीय अंकका लागि बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै उनले सनराइज बैंक ब्रान्चलेस बैंकिङलाई प्राथमिकतामा राखेर […]
विराटनगरमा एनआईसी एशिया बैंकको तीन नयाँ शाखा विस्तार (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौँ – एनआईसी एशिया बैंकको तीन नयाँ शाखा विराटनगरमा सञ्चालनमा आएको छ । भदौ २५ गते मोरङ जिल्लाको विराटनगर मेनरोडस्थित विराटनगर मेनरोड शाखा र रोडशेषस्थित रोडशेष शाखाको उद्घाटन विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले गरेका हुन् । त्यसैगरी विराटनगर हाटखोलास्थित हाटखोला शाखाको मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले उदघाटन गरेका हुन् ।
सुनसरीको इनरूवामा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौँ – सिद्धार्थ बैंकले भदौ ३० गते सुनसरीको इनरूवामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीे माझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको […]
काठमाडौं – प्रभु बैंकले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा असोज ०२ गते उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त स्थापित एक्स्टेन्सन काउण्टरको ऐकेडेमीका कार्यकारी निर्देशक विनोद र्अयालले उद्घाटन गरेका हुन् । मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा अध्ययनरत विध्यार्थीले अब विना झन्झट प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरबाट कारोबार गर्र्न सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र […]
काठमाडौं – नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आइतबार (आज) फर्किने भएका छन् । सी आइतबार मध्याह्न १२ बजेपछि स्वदेश फिर्ताका लागि विमानस्थल तर्फ जाने र दिउँसो १ बजे चीनका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको निमन्त्रणामा नेपाल आएका राष्ट्रपति सीले भेटवार्तालाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएका छन् राष्ट्रपति सीले आइतबार सत्तारुढ […]
काठमाडौँ । सुन राखेर ब्याज पाइने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा चौतर्फी चर्चा हुन थालेको छ । तर के साच्चै सुन राखेर ब्याज पाइन्छ त ? वा कति ब्याज पाइन्छ ? राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धि कस्तो रणनीति बनाउँदै छ त ? नेपालर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले यस विषयमा प्रकाश पारेका […]
काठमाडौँ । कर्पोरेट क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनुभएका उर्जाशील महिलाहरुको सम्मानार्थ कार्यक्रम हो, ‘कर्पोरेट ओमन’ । आजको अंकमा हामीले लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएकी हाल सिटिजन्स बैंक लिमिटेडकि प्रवक्ता एवम् प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उमंग शर्मालाई प्रस्तुत गर्दैछौं । प्रस्तुत छ अर्थसरोकारकर्मी मुना तामाङले उमंग शर्मासँग गर्नुभएको कुराकानी । १. नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा वा बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाहरुका लागि […]